I-infographics, isixhobo sokuziveza ngendlela ebonakalayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-infographic sisixhobo esivumela bonisa ngolwazi ngenkcazo emiselweyo eshwankathela idatha kwaye iyicacisa ngegrafu, ii-icon ngendlela elula yokuyiqonda.
Zisetyenziselwa ukuqonda, ukunxibelelana okanye ukwakhiwa kolwazi ngendlela ecacileyo, elula, necacileyo kunye neguqukayo yokwenza ukuqonda kwabo kunye nokwazisa imixholo kucace gca. Ngamafutshane, ziluncedo kuzo ukunxibelelana ngemixholo entsonkothileyo Ukusuka kwezinye izixhaso kuya kuba sisidima kwaye kunzima ukuyiqonda.
Zikwasetyenziselwa ukubona idatha kunye nokwenza ubungakanani Ulwazi olukhulu kakhulu okanye iinkqubo zokuqonda. Lunxibelelwano olusebenzayo ukuba sifuna ukuthatha ingqalelo yomamkeli.
Ukwenza i-infographic, into yokuqala yokwenza kukhetha isihloko. Kuya kufuneka wenze uphando kwaye uqokelele ulwazi ukuze kamva ukhethe olona lubalulekileyo. Zininzi iintlobo ze-infographics, inokukunceda ucacise indlela yoku-odola ulwazi.
Siza kubona ukuba zeziphi iintlobo ze-infographics ezikhoyo, siza kugxila kwiindidi ezintandathu, gcina engqondweni ukuba okoko ukwenza ngengqondo, ungasebenzisa ngaphezulu kwesinye.
Ulandelelwano: Chaza ibali ngenyathelo okanye ngokwamanqanaba. Unokwahlulahlula iminyaka, iintsuku, iinyanga, iiyure, phakathi kwabanye.
Inkqubo: Inkqubo enesiqalo nesiphelo kwaye yahlulwe ngokwamanqanaba. Umbono olungileyo kukufaka umbala kwinqanaba ngalinye, liya kuzisa ukucaca xa ulwahlula ulwazi.
Indawo: Isetyenziselwa ukubonisa ulwazi malunga nendawo, indawo, ilizwe okanye indawo.
Eyona nto isetyenzisiweyo, ibhekisa kwimveliso, imeko, into, njl. Sibhekisa kwiimpawu ezithile, zonke iipropathi kunye neempawu zento ethile.
Izibalo: Imele ukuphathwa kweyona datha yolwazi inefuthe kwaye ichaphazelekayo. Kukuphathwa kwedatha eninzi enokuthi ishwankathelwe ngokubonakalayo. Amakhulu amaninzi amanani kunye nedatha yeenkcukacha manani ziyasetyenziswa. Yindlela ebonakalayo, elula nenomtsalane yokuqonda nokushwankathela isixa esikhulu sedatha.
Ngobomi bomntu: Chaza ubomi okanye umsebenzi womlinganiswa.
Ngaphezulu kwako konke, gcinani engqondweni ukukhankanya imithombo, kufuneka ithembeke, eya kuthi incede uphando lwakho ukuba lube nolwazi olusemgangathweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » I-infographic, ziveze ngakumbi ngokubonakalayo
Imixokelelwane yebhayisikile ukubonisa iimvakalelo zabantu